DAREEN 1aad: Abaarta SIMA iyo Saamaynteeda – Radio Daljir
DAREEN 1aad: Abaarta SIMA iyo Saamaynteeda
Abriil 4, 2017 9:32 g 0
Radio Daljir – DAREEN waa barnaamij cusub oo aan kaga warbixino saamaynta abaarta SIMA u gaysatay dadka soomaaliyeed, gaar ahaana xooladhaqatada. Barnaamijka oo ah todobaadle Radio Daljir ka baahi doona maalinta Axadda ah saacada Afrikadda bari marka ay tahay 2:30PM, wuxuu ka koobanyahay warar, warbixino, waraysiyo, falaanqayn, iyo waliba aragtida dhegaystayaasha.
Qaybta koobaad ee barnaamijka DAREEN waxaan kusoo qaadanaynaa:
B. Barakacayaal hore u deganaa magaaladda Boosaaso oo martigeliyey barakacayaal cusub oo ahaan jirey xooladhaqato ku caydhoobey abaarta daran ee dalka ka jirta. Barakacayaashan cusub ayaa ka soo guurey miyiga goboladda Bari iyo Sanaag.
T. Qiimaha xoola nool ee magaaladda Caabduwaaq oo sare u kac ku yimi kadib markii ay inta badan xoolihii ku dhaqnaa deegaanadaaasi abaarta ku dhamaadeen taas oo yaraysay xoolaha sayladda loo soo iibgeyn jirey waxaana arintaaasi sababtay in xooluhu qaaliyoobaan xili ay caato darani ka muuqato.
J. Waraysi ka hadlaya sida dadka Soomaaliyeed dhexdooda isugu gurmanayaan oo aan la yeelanay Maxamed Yuusuf Jaamac (Tigey) oo u dhaqdhaqaaaqa taakulaynta dadka abaaruhu saameeyeen.
X. Deegaanka Ceel Daahir ee gobolka Bari oo ay ku xaroodeen 150 qoys oo abaarta ku xoolabeelay iyo xaalad nolol xumo oo haysata qoysaakaas
Iyo xubinta aragtida dhegaystayaasha oo aan ku eegayno in Dawladda Puntland qaadatay doorkii kaga aadaanaa gurmadka abaaraha.
Maqaalo Kale 268 Wararka 19744
DHEGAYSO Saaka & Dunida iyo Maxamud Cabdi Ibrahim
DHEGAYSO Caawa & Daljir iyo Wariye Maxamud Cabdi Ibrahim (MCI)